अचम्मका आमाछोरा ! आमा ६१ बर्षमा बुलेट कुदाउनी, छोरा बिस्वकै महँगो बाईक चलाउनी (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : May 23, 2019
यतिबेला विश्वकै महँगो बाइक चडने नेपाली युवा निकै चर्चामा आएका छन । उनको कुरा पहिले कसैले पत्याएनन । अहिले यो सुनेर सबै दङ्ग पर्छन । अझ रोचक कुरा त के छ भने उनको आमा ६१ बर्षको उमेरमा साडी लगाएर बुलेट बाईक सरर …. कुदाउछिन । यतिबेला आमा पुष्पलता आचार्य र अन्दिप आचार्य सामाजिक संजालमा भाईरल बनेका छन ।
आमा पुष्पलता आचार्य !
हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान समाजमा यस्तो मान्यता छ। महिलाले बाइक लिएर हिँड्दा टक्क अडिएर जिब्रो टोक्दै ओहो!! भन्नेहरू अहिले पनि प्रशस्तै भेटिन्छन। हेभी बुलेट बाइकको भुटुटु.. आवाजमा सवार पुष्पलता आचार्य र लक्ष्मी खतिवडालाई देखेर समाज अवाक हुन्छ।
साझा यातायात चालक रेबिका थापालाई देखेर चकित हुन्छ। त्यस्तै डोजरको सिटमा बसेर डाँडो खारिरहेकी मुना घिमिरेलाई देखेर आश्चर्यचकित हुन्छ।उनीहरू जस्ता धेरै महिला यो समाजमा छन हाम्रो जस्तो पुरुषको वर्चस्व रहेको समाजलाई थप आश्चर्य चकित बनाएका छन।
६१ वर्षिया पुष्पलता आचार्य आफूलाई कतै जानुपर्यो भने बुलेट बाइकनै प्रयोग गर्छिन। आफ्नो छोरा हरुसँग राइडमा गएको बेला स्कुटर चलाउँदा आफूलाई दुख लागेको उनी बताउँछिन। स्कुटर चलाउँदा अरुले उछिनेर जाँदा मनमा खिन्न भयो अनि बाइक सिके आचार्यले भनिन्।
आफ्नो टोलमा सिक्न अफ्ठयारो महशुस भएका कारण उनले पृथ्वी राजमार्गमा बाइक कुदाउन सिकिन। अहिले उनी छोरासँगै उनका साथीहरुसँग राइडमा गइरहन्छिन। हालै अब भारत जाने सोच बनाएको उनले भनिन् । उनी बाइक को गतिबारेमा भन्छिन्मेरो स्पिड अलि बढि छ। मलाई कमै व्यक्तिले उछिनेर अघि बढ्छन। उनले बाइकबाटै १६ वटा जिल्ला घुमिसकेकी छन।
उनले बुलेट बाइक यात्रा छोराको लागी चलाएको बताउछिन् भन्छिन बाइक चढेरै १६ जिल्ला घुमे उनले ज्वरो आएर सुत्दा पनि सपनामा बुलेट चढेको सपना दखेको बताएकी छन।उनले बुलेट सिक्नकै लागी सिधै लामो यात्रामा गएकी थिइन। भन्छिन कमै व्यक्ति ले मात्र मलाई उछिनेर हिड्छन। उनी इन्डियाका सबै जसो प्रान्त बाइकमा एक्लै चढेर आफै चलाएर घुमेकी छन।
छोरा अन्दिप आचार्य !
अन्दिप आचार्य नेपाली नागरिक हुन् । तर उनी संसारकै सर्बाधिक ठूलो बाइक चढ्ने ब्यक्ति बनेका छन् । उनले हालै हार्ले डेभिडसनको भी८ चोपर किनेका छन् ।इंग्ल्यान्डको नटिंघममा बसोवास गर्ने अन्दिपले किनेको हार्लेको यस्तो बाइक इंग्ल्यान्डमै ६ वटा मात्र छन् । ती ६ मध्ये एक बाइक अन्दिपको हुन पुगेको छ ।
उनी नटिंघममा गोर्खा किचेन नामक रेष्टुराँ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।अन्दिपले यो बाइक ९० हजार पाउन्डमा किनेका हुन् । नेपाली बजारमा यसो अनुमान लगाउदा यसको मूल्य ३ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि नै पर्ला । नेपालमा भए धेरै कर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
हामी अनुमान लगाउन सक्छौ, अन्दिप नै यति धेरै महंगो बाइक चढ्ने एक्लो नेपाली होलान् । हार्ले आफैमा एउटा प्रतिष्ठित र महंगो कम्पनी हो । यस्तो कम्पनीको महंगो बाइक चढ्नु आफैमा गजबको शोख हो ।हार्ले डेभिडसनको सो बाइक ५७०० सीसीको छ ।
यसको तौल १००० केजी छ । अन्दिपले ठट्यौली पारामा भनेका छन्, ‘म ८० केजीको ब्यक्तिले एक हजार केजीको बाइकलाई सम्हाल्नु पर्ने भएको छ । जसरी पनि यसको लागि व्यवस्थापन गर्नु परेको छ ।’अन्दिप बाइकका कति शौखिन हुन् भने यस अघि पनि उनले हार्ले डेभिडसनको बाइक आफैले डिजाइन गरी अमेरिकी कम्पनीलाई बनाउन लगाएका थिए ।
हार्लेको सो बाइकमा पछाडिको टायर संसारकै सर्बाधिक ठूलो अर्थात ३३० एमएम र १२७ क्युबिक पिस्टनको थियो ।सो बाइकको मूल्य ३९ हजार पाउण्ड थियो । अन्दिपले अहिले यही बाइक बेचेर फेरि नयाँ भी८ चोपर किनेका हुन् ।
रोचक कुरा के छ भने अन्दिप आफैले डिजाइन गरेको र ३९ हजार पाउण्ड मूल्य परेको सो बाइक हाल इंग्ल्यान्डमा यति चर्चित भयो कि ४५ हजार पाउण्डमा हारालुछका साथ यो बाइक बिक्री भयो ।आफ्नो डिजाइनलाई यसरी धेरैले मन पराएकोमा आफू गौरवान्वित भएको अन्दिप बताउछन् ।विगत १७ बर्ष यता अन्दिप हार्ले डेभिडसनको लाइफ मेम्बर छन् ।
उनकी श्रीमती मुक्ता आचार्य पनि हार्लेको लाइफ मेम्बर छिन् ।
अन्दिप यो अवस्थामा पुग्नुमा श्रीमतीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताउछन् । श्रीमती उनको एक असल साथी पनि हुन् ।हार्ले राइडरहरु संलग्न रहेको क्लबमा ३५१ जना छन् । तर अन्दिप र उनकी श्रीमती मात्र एसियाली मुलका हुन् । उनीहरुको क्लबको नाम शेरउड च्याप्टर हो ।
यो समूहले संसारभरि टुर गर्छ । आफू हार्लेमा अमेरिका र क्यानडा मात्र जान बाँकी रहेको दाबी गर्छन् ।अन्दिपसँग अहिले हार्लेका दुई वटा बाइक र एउटा रोयल इन्फिल्ड बुलेट ५०० पनि छ ।
बुलेट बाइक पनि उनले कस्टमाइजेसन गरी आफ्नै स्टाइलको बनाएका छन् । उनले आफूसँग भएको हार्लेको फ्याट ब्वाई १६०० सीसी भने कहिल्यै नबेच्ने बताउछन् ।अन्दिप बाइकका शौखिन मात्र होइनन्, समाज सेवामा पनि उत्तिकै जागरुक छन् । नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पको समयमा आफूसँग भएको डुकाटी र हार्ले डेभिडसनको अर्को बाइक राफलमा बेचेर नेपालका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेका थिए ।
त्यो समयमा आफूले गरेको ४७ लाखको सो सहयोग सम्झिदा अहिले पनि आफूलाई गौरवको अनुभूति हुने गरेको उनले बताए ।नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि अन्दिपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । विगत ४ वर्ष यता उनले बाइक टुरको लागि इंग्ल्यान्डका १०/१२ जना साथीहरुलाई नियमित रुपमा नेपाल पठाइरहेका छन् । श्रोत : नेपाल अटो ।